Fiaraha-mitantana ireo nosy manodidina Fivarotan-tanindrazana, hoy ny Teza
Voizina amin’ny haino aman-jery frantsay indray ankehitriny taorian’ny hetsika notarihin’ny mpanao politika frantsay Marine Le Pen fa an’ny frantsay ireo nosy manodidina an’i Madagasikara na ny nosy Eparsa.
Averina, hoy ny antoko politika Teza, fa nisy foto-kevitra napetraky ny firenena mikambana milaza fa tsy maintsy hajaina ny fiandrianan’ireo firenena voazanaka taloha. Nosy kely manodidina an’i Madagasikara ireo. Ao i Europa, Juan de Nova, Bassas da India sy Iles Glorieuse ary Tromelin, hoy ny filohan’ny antoko, Jean Louis Rakotoamboa. Ny lalàna na « loi d’annexion » nivoaka ny 6 aogositra 1896 dia fantatry ny frantsay fa tafiditra ao anatin’ny Madagasikara voazanaka ireo. Ny 1 aprily 1960 dia nesorin’ny frantsay tsy ho ao anatin’i Madagasikara, izany hoe, nosamahany ireo nosy ireo. Nisy avy eo ny fangatahantsika tamin’ny ONU mba hanampiany antsika hamerina ireo nosy ireo. Nisy adihevitra mikasika ny lalàna momba izany tao amin’ny ONU ary nanapahany indray fa antsika ireo nosy ireo ary nibaiko ny frantsay hamerina ireo nosy ireo izy. Tsy misy ilana ny fiaraha-mitantana, araka izany, fa famerenana ambongadiny ireo nosy ireo amin’ny Malagasy no tokony hisy. Fivarotan-tanindrazana ny fiaraha-mitantana, hoy hatrany izy.